Oslo: Sadex wiil soomaali ah oo walaalo oo loo xukumay danbiyo la xiriira kufsi iyo dhac. - NorSom News
Oslo: Sadex wiil soomaali ah oo walaalo oo loo xukumay danbiyo la xiriira kufsi iyo dhac.
Sida ay maanta qoreen qeybo badan oo kamid ah warbaahinta dalkan Norway, labo wiil oo dhalinyaro soomaali ah, walaalana ah ayaa maxkamada Oslo ay ku kala xukuntay 7 sano oo xabsi ah, iyo 3 sano iyo bar xabsi, kadib markii ay maxkamadu ku heshay danbiyo dhowr ah lagu soo oogay, ayna kamidyihiin falal la xiriira kufsi iyo dhac. Isla wiilashan walaalkooda ayaa isla maxkamada Oslo ay labo isbuuc kahor ku xukuntay fal kale oo kufsi ah, sida uu qoray NRK.
Wiilashan soomaalida ah oo da´ahaan kala jira 16, 17 iyo 19 sano ayuu NRK qoray inay yihiin Norwiijiyaan asal ahaan kasoo jeedo, ayna mudo ku noolaayeen dalka Ingiriiska.
Fal danbiyeedka ugu daran ee wiilashan lagu soo eedeeyay ayaa la xiriira kufsi xaafada Torshov loogu geystay gabar 15 sano jir ah. Wiilka weyn ayay lagu soo eedeeyay inuu gabadha ugu hanjabay inuu dili doono, hadii aysan sameyn sida uu uu rabo. Halka kan kalena uu mindi ku qabtay wiil gabadha la socday, uuna ugu hanjabay inuu galin doono, inta uu uu socday falka kufsiga ah.
Labadan wiil ee walaalaha ah ayaa wiilka iyo gabadhaas ugu hanjabay inay dili doonaan, hadii ay la xiriiraan booliska, sida uu qoray NRK.
Walaalahan ayaa waxaa xukunka xabsiga ah u dheer in lagu xukumay lacag magdhow ah oo dhan 250.000 NOK oo gabadha kufsiga loo geystay loo xukumay iyo 175.000 nok oo wiilka gabadha la socday loo xukumay.
Wiilka weyn ayay maxkamadu sidoo kale ku heshay falal danbiyeedyo kale oo ay kamid yihiin isku day kufsi oo la xiriira dad kala duwan.
Andreas Nyhaug oo qareen u ah wiilka 16 sano jirka ah ayaa sheegay inay xukunka maxkmada ka qaadan doonaa racfaan, wuxuuna horey NRK u sheegay in wiilkan uu iska fogeeyay fal danbiyeedka lagu soo eedeeyay.
Walaal kale oo isna fal kufsi ah loo xukumay:
Wiil kale oo la dhashay labada wiil ee maanta maxkamada Oslo ay xukuntay ayaa isna sidoo kale labo isbuuc kahor loo xukumay fal danbiyeed la xiriira kufsi loo geystay gabar 14 sano jir ah. Wiilkan oo hada 16 sano jir ah ayaa xiliga uu falkaas geysanayay da´ahaan jiray 15 sano. Waxaana lagu xukumay 4 sano iyo bar xabsi ah, taas oo 3 sano iyo bar ah kamid ah ay tahay xabsi ay shuruud ku xirantahay ah.
Alexander Rydberg Greaker oo qareen u ah wiilka 16 sano jirka ah ayaa NRK u sheegay inuu ka xunyahay waxa dhacay uuna raali-galin siinayo hooyada gabadha dhibanaha ah.
Previous articleSV iyo Rødt: Waxaan dalbaneynaa in xaalada Mahad Abiib wax laga qabto
Next articleDowlada Denmark: Soo galootiga aan wadankoodii lagu celin karin, waxaan ku xareyn doonaa Jaziirad lama degaan ah